🥇 ▷ Apple: iPhone 11 (2019) ayaa la sheegay inuu leeyahay cajiinka degdega ah ee USB C oo uu kujiro hillaaca dabka ✅
Apple: iPhone 11 (2019) ayaa la sheegay inuu leeyahay cajiinka degdega ah ee USB C oo uu kujiro hillaaca dabka
Waxyaabihii u dambeeyay ee qarsoon iyo tilmaamaha qarsoon ee Apple laftooda waxay muujinayaan in iPhone 11 si rasmi ah loo bilaabi doono 10-ka Sebtember. Hadda waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in iPhone 11 uu la imaanayo dallad degdeg ah oo USB-C ah oo ay ku jirto laydhka Hillaac.
Adeegsi-Twitter ChargerLAB waxay ku leedahay barteeda twitter-ka maanta waxay sheeganeysaa in iPhone 11 uu ugu dambeyntii noqon doono taariikhda xaraashka 5W. Halkii mid waa inuu lahaadaa Apple USB-C charger iyo sidoo kale fiilo “Hillaac ilaa USB-C” oo ay ku jiraan xirmada. Taasi waxay la macno tahay in Apple iPhone-kii markii ugu horreysay uu kaamirooyinka deg-degga ah ee mitliefert, xitaa haddii xiriirinta aaladda dhabta ah ay weli tahay deked hillaac ah. Tani waxay ku soo beegmaysaa iyada oo la raacayo macluumaadka laga soo dhejiyay cinwaanka mareegta laga bilaabo Maarso ee sannadkan. Xitaa markaa, Jabaanku wuxuu horey u soo sheegay AppleNew blog Mac Otakara in iPhone 2019 lagu qalabeyn doono cajiin dhakhso badan USB-C iyo fiilo u dhigma.
A13 iyo kamarad saddex-geesood ah
Apple iPhone 11 (2019) wuxuu la imanayaa kamarad saddex-geesood ah oo ku taal saldhigga kamaradaha labajibbaaranaha. | (c) OneLeaks
Guud ahaan qofku uma malaynayo in Apple iPhone 11 uu isbadal weyn ku sameeyo kiiska; Waxaa laga yaabaa in qalabku la yimaado qaab dhismeedka galaaska cusub ee matte. Saldhigga laba-geeska ah ee laba-geeska ah, oo leh kaamirooyin saddex-geesood ah, ayaa hadda caan ah. Qalabka cusub ee kaameeraha ee gadaasha dambe waxaa laga rajaynayaa inuu noqdo mid casriyeysan oo tayo sare leh xagga sawirka marka loo eego qadka waxsoosaarka hadda – labadaba xagga qalabka iyo softiweerka, maadaama ay sidoo kale soo bandhigto waxyaabo badan oo cusub sida “Smart Frame”.
Gudaha iPhone 11 wuxuu kugu sugayaa adiga oo ku xiga mid cusub, dhakhso ah, kana yimid Apple A13 SoC ayaa sidoo kale soo saaray batari ka sii weyn, matoor Taptic cusub, taageero loogu talagalay kicinta bilaa-wadayaasha ee AirPod, iyo nidaam goob gudaha ah oo sax ah – astaamaha aan horay u soo bandhignay . Heer-kajawareega xawliga ah ee ka sarreeya aaladda 5-watt ee hore ee xirmada kuma koobna oo keliya abaalmarinta wanaagsan ee iibsadaha, laakiin gaar ahaan calanka Apple> 1000-doollar ka badan waqtiga la soo dhaafay.
Haddii daadku saxsan yahay, waxaan wax ku barannaa qiyaastii seddex toddobaad, haddii Apple iPhone 9 (iyo iPhone 11 Pro) safka si rasmi ah loo soo bandhigi doono.
Inbadan oo ku saabsan: Telefoonada gacanta, Taleefoonada casriga ah, Applesmartphones
Xigasho: Twitter, 9to5Mac